Plant la taaban karo Batching, fiicni la taaban karo, la taaban karo Boom saar Truck - Conele Group
Warshad batching la taaban karo
Warshad batching la taaban karo taagan
Warshad qodan madaafiic qallalan
jeclo la taaban karo
Twin-usheeda dhexe fiicni la taaban karo
ganacsigii ka baddesho la taaban karo
saar la taaban karo
gaari bamka la taaban karo kaca
Mashiinka warshadaynta la taaban karo
3 saldhig wax soo saarka
saldhig saarka ayaa waxa uu ku yaalaa ee South China, Southwest Shiinaha iyo North China.Convenient badda iyo rail gaadiidka ay hubisaa in faa'iidooyinka ugu badan.
15 cayn qalabka
Daboolaya la taaban karo ka baddesho shubto qodan iyo qalabka dib u warshadaynta, kala doorasho badan kuu.
waayo-aragnimo 25 sano
La aasaasay sanadkii 1993, ka go'an in R & D, iibka iyo ka dib-iibinta qalabka la taaban karo.
Shirkada 28 laan
oo deeq kala duwan diiradda on R & D iyo wax soo saarka ka mid ah qaybaha kala duwan, in la hubiyo in tayada qayb kasta waa heerka ganacsi iyo si madax-bannaan iibin karaa oo ka badbaaday ee suuqa.
dagaalyahaniin Shirkada iyo beeraysaa talanti xirfadeed iyo ururayaa horumarinta mudada dheer ee shirkadda ka.
adeegga kartoo muujinaysaa xooggeenna farsamo iyo suuqa acceptance.Almost wax walba waa la beddeli karaa sida ay baahidaada, daboolaa gudaha dooranaayo brand qaybo, decoration dibadda, etc.OEM iyo ODM waxaa bixisey.
Ka hor inta iibinta waxaan ku talinaynaa doonaa qalab ku haboon si waafaqsan baahida macmiilka iyo xaalado kale oo wax ku ool ah iyadoo la isticmaalayo our waayo-aragnimo iyo iibinta knowledge.After xirfadeed, our injineer diyaar u noqon debugging rakibaadda iyo tababar shaqsi ah online ama on site.
Factory qiimaha tooska ah
Raadinta nidaamka hay'adda agents.The waa istiraatiijiyad weyn oo ka tirsan kooxda si aan u wixiise oo dhan isku dayaan world.we'll fiican si ay u taageeraan iyo ilaalinta danaha qiimaha agent.lower, khayraadka macaamiil oo tayo leh, horumarinta bandhig advertising lacag la'aan ah iwm
Is ganacsigii ka baddesho fuulitaanka
Twin usheeda dhexe fiicni la taaban karo
reclaimer la taaban karo
JZC / JZR350 fiicni yar la qaadi karo